75W Mpụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ maka ebe obibi gas China Manufacturer
Nkọwa:Mgba ọkụ na-ekpuchi ọkụ maka ebe obibi gas,Mgbachi ọkụ ọkụ,Mgba ọkụ ọkụ maka gas ọdụ
Home > Ngwaahịa > Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ > 60w Na-ekpuchi Ìhè > 75W Mpụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ maka ebe obibi gas
Anyị 75W kanopi Ikanam ọkụ maka Gas Stations P roviding a ụbọchị na-acha ọcha (5000K) agba nke ìhè na 8250 lumens nke mmepụta, na-anapụta-egbuke egbuke, elu-edu ìhè, enwekwu nchekwa na nche.
Nke a na- eme ka ọkụ ọkụ na-enwu nwere 2 Ụdị usoro ntinye. Ịbelata ikike oriri, mmezi na ụgwọ eletrik gị site na dochie ihe nkedo nke 250W na ìhè 75W anyị nwere na Gas Station . Na-agbanwe ihe nkedo na-eme ka ọ dị ọkụ, nke a bụ 75W ọkụ ọkụ maka ebe gas gbutuo ụgwọ eletrik gị ruo pasent 75 site na dochie 250W. Ulo elu ụlọ anyị bụ Ezigbo maka ime ụlọ ma ọ bụ ọkara ọkụ n'èzí, dị ka ebe a na-edebe ụlọ n'ime ụlọ, ọdụ ụgbọ oloko, Stairwells, Passageway's, Ụlọ nkwụsị, ụlọ echere, wdg.
75W Epeepe Mgbaba n'èzí n'ọdụ ụgbọ ala Kpọtụrụ ugbu a
Mgba ọkụ na-ekpuchi ọkụ maka ebe obibi gas Mgbachi ọkụ ọkụ Mgba ọkụ ọkụ maka gas ọdụ Ebube ndị na-ekpuchi ọkụ maka ebe gas Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ na gas Igwe ọkụ na-ekpuchi ọkụ gas na 150w Ogwe ọkụ na-enwu ọkụ maka gas ọdụ Ebe a na-ekpuchi ọkụ na gas